Subdomains, SEO na Azụmaahịa | Martech Zone
Saturday, December 10, 2011 Tọzdee, Septemba 1, 2016 Douglas Karr
A bụ ihe na-emetụ SEO isiokwu (nke m gbaghaara ọzọ n'izu a): Subdomains.
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka SEO na-eleda subdomains anya. Ha chọrọ ihe niile n'otu ebe dị mma ka ha nwee ike ịme nkwalite saịtị na-adị mfe ma lekwasị anya n'inweta ngalaba ahụ ikike. Ọ bụrụ na saịtị gị nwere ọtụtụ ngalaba, ọ na-amụba ọrụ ọ na-ewe. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị ga-agba chaa chaa… ha chọrọ ka gamble gbaa ya n’otu aka. Lee nsogbu… mgbe ụfọdụ ọ na-eme ka ezi uche dị subdomain gị na saịtị.
N'ezie, ụfọdụ n'ime ihe onwunwe ndị natara n'aka ndị ama ama Google Nwelite Panda tụgharịa gaa subdomains. Otu n'ime saịtị ndị ahụ bụ Hubpages. Iji Semrush, anyị nyochara ọnụọgụ isiokwu nke Hubpages na-ahazi tupu na mgbe Panda kụrụ na ntinye ha na subdomains.
Á »If bá» rá »If rá» put na á »‹ debe niile nke ewere Keywords, Hubpages n'elu rankings bá »now ugbu a niile na isiokwu ndá» ‹dabeere na njá» gwá »! Lee ụfọdụ mkparịta ụka na ya:
Google Na-ekwu, "Ka Mpempe Iberibe Subdomain Bloom"
The Panda Idozi si Hubpages
Subdomains: Hubpages Way Of Google Panda Purgatory?
You hụrụ onye ọ bụla n'ime isiokwu ndị ahụ na-atụle mgbanwe ntụgharị or nsonaazụ azụmahịa? Ee… m mba.
Ọ bụghị naanị banyere ugbo ọdịnaya na Panda. Subdomains na-ekwe ka nkewa dị irè nke saịtị gị, na-enye nghọta ma na-elekwasị anya na ọdịnaya ahụ. Mgbe iberi na dais gị na saịtị gị n'ime subdomains, ị ga- ma eleghị anya ị ga-enweta akara na ogo ka ị na-ebugharị ọdịnaya ma nwee redirect okporo ụzọ. Ma n'ikpeazụ, ọ ga-abụ na ị ga-eme nweta mma ogo na isiokwu dị mkpa, ụgbọala okporo ụzọ ndị ọzọ dị mfe site na saịtị gị, ma nyekwuo ahụmịhe ndị ọrụ ezubere iche nke na-eke ndị na-agụ akwụkwọ gị nke ọma ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ ntụgharị niile gbanwee.
Subdomains are bad for SEO, ha nwere ike ịbụ kediegwu maka ya… ma ọ bụrụ na i kwere SEO bụ banyere na- nsonaazụ azụmahịa. Mana site na itinye subdomains, ndị na-ahụ maka SEO maara na ha na-agbapụ n'okporo ụzọ ahụ. Yabụ… ha ga-eme mkpebi nke na-enweta nsonaazụ ụfọdụ n'oge na-adịghị anya ma ọ bụ nsonaazụ kacha mma ma emesịa? Ọ bụrụ na ha chọrọ ịkwụ ụgwọ a na-akwụ ha, ha ga-enweta ụzọ dị mfe.
Ebumnuche bụ atụmatụ ịzụ ahịa dị irè nke a na-ejighị n'aka na ụlọ ọrụ niile. Anyị na-ahụ ifufe nke mgbanwe. Google maara nke ukwuu dị mkpa, ọdịnaya ezubere iche bụ isi ihe dị ukwuu maka atụmatụ dị ukwuu… ọ bụ ihe etinyere igwe nchọ ha. Mgbanwe ndị ọzọ algorithm 600 ha na-eme kwa afọ na-enyere aka ịnọgide na-elekwasị anya.
Yabụ kedu ihe ị ga-eji mee nke ahụ ezere ezubere iche ọdịnaya na onye ọrụ mmekọrịta?
Ihe atụ ọzọ bụ mwakpo nke infographics nke nwere enweghị ihe ọ bụla ime na ezigbo azụmahịa. Guysmụ nwoke SEO hụrụ nnukwu infographic n'anya n'ihi na ọ ga-efegharị na ụlọ ọrụ ga-enweta tọn backlinks na ha ga-abawanye ogo na okporo ụzọ.
Ma ọ bụ ọ…
Ugbu a ị nwere tọn trafịk na-abụghị ịtụgharị. Uncegba ụgwọ agbago elu, mgbanwe na-agbada… mana ị na - akawanye nke ọma - ọkachasị na ụyọkọ okwu enweghị ihe jikọrọ azụmahịa gị.
N'uche m, ị dịla mebiri gị search engine ikike na njikarịcha n'ihi na ị mgbagwoju anya na search engines na-eche echiche na gị na saịtị ahụ nwere ike ịbụ ihe ya. Ọ ga-akara m mma ịnwe ịnụ ọkụ ọkụ nke ọma na ozi ụlọ ọrụ akọwapụtara nke ọma karịa akwụkwọ ozi nke na-adịghị mma. N'ihi gịnị? n'ihi na ọ na-elekwasị anya ikike na aha m na ụlọ ọrụ m. A ezubere iche na saịtị ga-mgbe outperform a n'ozuzu otu… na m ga-ọbụna banye na-elekọta mmadụ mmetụta nke a uko obodo.
Ọ bụrụ na onye ahịa m nwere isiokwu dịgasị iche iche nke nwere ike ọ gaghị emetụta ya, ọ ga-akara m mma ịgwa ha ka ha kwaga subdomains, were kụrụ ya, wee wuo atụmatụ siri ike gbadoro anya na ụlọ ọrụ ha, ngwaahịa na ọrụ ha. Ọ bụrụ na ihe niile ị n’azụ bụ ọkwa na njem, subdomains nwere ike bụrụ pariah. Ma ọ bụrụ na ị na-mgbe nsonaazụ azụmahịa, nwere ike ị chọrọ ile anya nke abụọ.
Ndị anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ịme ka ndị ahịa gbanwee na-aghọta ọrụ ha nwere ike ịrụ. Nwere ike ịnye subdomains ohere ọzọ.
Tags: azụmahịansonaazụ azụmahịadomainAsubdomain seosubdomains